Lacagta rasmiga ah ee Kooxaha Serie A kaga luntay xuquuqda TV-yada oo la shaaciyay – Gool FM
Lacagta rasmiga ah ee Kooxaha Serie A kaga luntay xuquuqda TV-yada oo la shaaciyay
(Italy) 18 Abril 2020. Wargeyska ka soo baxa Talyaaniga ee La Repubblica ayaa daabacay isku darka lacagaha ay khasaareen kooxaha horyaalka Serie A ee ka soo gali jiray muuqaal-baahiyeyaasha kaddib markii ciyaaraha dalkaas oo idil loo joojiyay faafaha coronavirus awgiis.
Wargeyska ayaa daaha ka rogay in wadar ahaan kooxaha Taliyaaniga ay lumiyeen 160 milyan oo euro oo ka soo gali lahaa TV-yada.
Sky Sport Italia iyo DAZN oo ah labada baahiye ee ugu wayn Serie A ayaa isku dar bixiyay 973 milyan oo euro oo ka mid mid ah 1.4 milyan oo euro oo ah heshiis hore ay TV-yada iyo kooxaha horyaalka ka ciyaara ay galeen.
Lacagtaas ayaa u dhiganta 85% lacagtii xilli ciyaareedka oo idil, balse waxaa la ciyaaray oo qura 68% kulammadii xilli ciyaareedka maadaama uu dalka Talyaaniga wajahay xaalad adag oo xanuunka coronavirus ah.
Si kastaba ha ahaatee, Wargeyska ka soo baxa caasimadda Talyaaniga ee Rome ayaa shaaciyay in maamulka horyaalka Serie A iyo baahiyeyaasha ay qaadan doonaan wada xaajood ku aaddan in TV-yada ay helaan qiimo dhimis xilli ciyaareedka dambe iyo in la go’aamiyo lacagta ay bixin doonaan inta ay la eg tahay.